Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ndị ahịa Black Friday: Otu ụzọ n'ụzọ atọ bụ adịgboroja
Otu n'ime ụdị okporo ụzọ adịgboroja nke CHEQ kpughere bụ ndị na-akpachasị ihe na ndị na-akpụ akpụ, botnets ọkaibe, akaụntụ adịgboroja, pịa ugbo na ndị ọrụ nnọchiteanya yana ọtụtụ ndị ọrụ iwu na-akwadoghị na-eme aghụghọ metụtara eCommerce. Emere ọmụmụ ihe n'ofe ọdọ mmiri karịrị 42,000 webụsaịtị na North America, Europe na Asia, na-etinye ọtụtụ narị ule cybersecurity na onye ọ bụla na-eleta webụsaịtị iji chọpụta izi ezi ha.
Achọpụtara na saịtị eCommerce dị mfe nke ukwuu, na-enwe nnukwu mkpughe maka mwakpo kaadị, aghụghọ nkwụghachi ụgwọ, mmebi data, ndebanye aha adịgboroja na ụdị mmemme ndị ọzọ na-akpaghasị.
Ebe ndị na-ere ahịa na-emefu ihe dị ka ijeri $ 6 na ahịa Black Friday, ebe a na-ekpughekwa ya na aghụghọ ego, data skewed na ego ha nwetara, CHEQ na-eme atụmatụ na mmebi nke azụmahịa na Black Friday a nwere ike karịa ijeri $ 1.2.
E nwetara atụmatụ ndị a site na mkpesa CHEQ na nso nso a na-ekpuchi ọnụ ahịa okporo ụzọ adịgboroja na azụmahịa n'ịntanetị.